Inona no dikan'ny hoe Bad Bunny 2032? - Wwe
Inona no dikan'ny hoe Bad Bunny 2032?
Bad Bunny dia iray amin'ireo anarana malaza indrindra mivoaka avy amin'ny WrestleMania 37 Night One, fa maninona no 'Bad Bunny 2032' dia zavatra iray amin'ny internet ihany koa?
Bad Bunny dia nanao ny fidirany WrestleMania 37 manao lobaka misy '2032' voasoratra eo aloha, fa inona no dikan'ilay isa? Inona ilay Bad Bunny 2032, ary maninona no hitanao manerana ny media sosialy izany?
Aza hatsembohana; manana ny valiny tadiavinao izahay.
Bad Bunny 2032 midika hoe nohazavaina
Ny rakikiran'i Bad Bunny farany teo, 'Ny fitsidihana farany an'izao tontolo izao' izay adika amin'ny 'The Last Tour of the World,' dia natao taorian'ny niheveran'ny mpanakanto nahazo loka Grammy ny fitsidihany farany tamin'ny 2032.
Eny, efa nahita mialoha ny faran'izao tontolo izao i Bad Bunny, ary nidina izany tamin'ny 2032. Ny rakipeon'i Bunny dia manodidina ny fijery ny kaonseritra farany hataony amin'ny ho avy.
Nanazava ny 'Bad Bunny 2032' sy ny aingam-panahy ao ambadiky ny rakikirany farany ilay mpanoratra tononkira malaza mandritra ny resaka miaraka amin'ny Apple Music TV.
'Nandritra ny fotoana fohy dia toa ny faran'izao tontolo izao. Toy ny nandany ny fitsidihako farany tamin'ny 2032 hampandrosoana ny teny tamin'ny taona 2020. Efa nikasa ny ho tonga amin'ny zavatra hafa mihitsy aho satria izany no tiako indrindra, hoy izy. 'Ny fanaovana risika sy fanatanterahana ny faniriako ary ny nofiko.'
Bad Bunny dia nandrakitra sy namoaka ny 'El Último Tour Del Mundo' nandritra ny areti-mandringana COVID-19, ary teo an-tampon'ny US Billboard 200.
'Bad Bunny 2032' dia lasa modely ho an'ny meme mifandraika amin'ny tolona, ​​ary ny sasany amin'izy ireo dia somary mahatsikaiky!
Bad Bunny dia manana ny fitaovany 2032 satria io no taona natrehiny hiatrika ny Omos ho an'ny titre WWE amin'ny hetsika lehibe Wrestlemania 48.
- Alika Be. (@riffpr) 11 aprily 2021
Tamin'ny 2032 ary i Bad Bunny dia nandresy an'i Goldberg niverina ho an'ny Titre Universal ao #WrestleMania pic.twitter.com/bSDBEFtA3t
- Andriamatoa Nomery 1️⃣ (@TheManThePlan) 11 aprily 2021
Ka eo ianao no manana azy; izany no fantatsika momba an'i Bad Bunny 2032. Ilay mpanakanto 27 taona angamba dia nitazona ny rakikirany tamin'ny sehatra lehibe indrindra tamin'ny tolona pro. Raha mpankafy Bad Bunny koa ianao dia afaka mahazo t-shirt Bad Bunny 2032 eto ihany .
Fampisehoana Bad Bunny's WrestleMania 37
INONA. A. MATCH! @sanbenito & @ArcherOfInfamy mandresy amin'ny #WrestleMania ! pic.twitter.com/OsHxOO4hco
- WWE WrestleMania (@WrestleMania) 11 aprily 2021
Ny firehetam-po ara-dalàna nataon'i Bad Bunny tamin'ny tolona dia nahatonga azy ho olona tsara laza tao amin'ny fahitalavitra WWE nandritra ny herinandro vitsivitsy. Bad Bunny dia avy amin'ny firenena manana tantaram-piadiana matihanina manankarena ary mpankafy marokoroko manaraka azy, ary nofinofiny nandritra ny androm-piainany ny nanao fampisehoana tany amin'ny peratra WWE.
Ny karazan'olona WWE isan-karazany - izay nahita fiaran-dalamby Bad Bunny tao amin'ny Ivotoerana Fampisehoana WWE - dia nanamarina ny fanoloran-tenan'i kintana latina tamim-pahatsorana hiomana amin'ny lalao.
Ny fiofanan'i Bad Bunny dia nanome tombony be dia be rehefa nahazo ny fitsapana tamin'ny fifaninanana tolona matihanina nataony tao WrestleMania 37. Nandresy an'i Miz & Morrison i Bad Bunny sy i Damian Priest, ary i Bunny no nibata ny fandresena tamin'ny Tompondakan'i WWE indroa.
Ilay rapper Puerto Rico dia nanao ny seho an-tsehatra tsara indrindra natao hatrizay ho an'ny olo-malaza iray. Rehefa dinihina tokoa, tsy isan'andro no ahitanao ireo olo-malaza manatanteraka Destroyers Kanadiana sy Falcon Arrows amin'ny lalao voalohany.
Ny duo an'ny @sanbenito & @ArcherOfInfamy manohitra @mikethemiz & @TheRealMorrison !
Stream #WrestleMania amin'ny @PeacockTV ▶ ️ https://t.co/Wp5S57WLnr pic.twitter.com/iUbXF3sOWK
- WWE (@WWE) 11 aprily 2021
Ny fanehoan-kevitry ny haino aman-jery sosialy tamin'ny debutan'i Bad Bunny WWE dia nisy vokany tsara ihany koa. Mpankafy maro aza no nilaza fa ity lalao ity dia afaka mahazo ny megastar manerantany ao amin'ny Hall of Fame Celebrity Wing WWE any an-toerana.
Bad bunny 2032 mania hall of fame
- Black Saber JR (@_blacksabrejr) 11 aprily 2021
Adam Pearce sy Drew Gulak dia notendrena hanampy an'i Bad Bunny ao amin'ny Performance Center.
Asa tsara, fellas. #WrestleMania
- Alex McCarthy (@AlexM_talkSPORT) 11 aprily 2021
Na izany aza, hahita bebe kokoa an'i Bad Bunny amin'ny fahitalavitra WWE ve isika amin'ny ho avy? Ny zavatra rehetra dia mety hitranga aorian'ny fiatombohany mahavariana ao amin'ny WrestleMania 37.
ny fomba famelana ny olon-tianao tsy tia anao
ny fomba hahatonga azy hanaja ahy
fandefasana hafatra amin'ny ankizivavy aorian'ny daty